Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kwezivalo ezahlukeneyo - iTshayina NjengeValve (iTianjin)
Izinto eziluncedo nezingeloncedo zezivalo ezahlukeneyo
1. Isango ivelufa : esangweni ivelufa ibhekisa ivelufa ukuba ilungu lokuvala (RAM) lihamba kwicala nkqo kwi-channel axis. Isetyenziswa ikakhulu njengendawo yokusika kumbhobho, oko kukuthi, ivule ngokupheleleyo okanye ivaliwe. Ngokubanzi, izivalo zamasango azisetyenziselwa ukulawula ukuhamba. Ingasetyenziselwa uxinzelelo lobushushu oluphantsi okanye ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu, kwaye inokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo zevalve. Kodwa ivelufa yesango ayisetyenziswa ngokubanzi kwimibhobho ehambisa udaka kunye nezinye izinto zosasazo
① Ukunganyangeki kolwelo kuncinci;
Tor Itorque efunekayo ekuvuleni nasekuvalweni incinci;
Can Ingasetyenziselwa kumbhobho wenethiwekhi wokujikeleza ohamba ngokuphakathi kumacala amabini, oko kukuthi, indlela yokuhamba yokuphakathi ayikhawulelwanga;
④ Xa ivulwe ngokupheleleyo, ukhukuliseko lomhlaba wokutywina lisebenza kancinci kunelokuma kwesivalo;
Ubume bomzimba bulula kwaye iteknoloji yokuvelisa ibhetele;
Ubude besakhiwo bufutshane.
Ubukhulu bangaphandle kunye nokuphakama kokuvula kukhulu, kwaye indawo yokufaka ikhulu kakhulu;
Kwinkqubo yokuvula nokuvala, umphezulu wokutywinwa kukruthakruthwano, kwaye ukukhuhlana kukhulu, nokuba kulula ukwenza imeko ye-abrasion kubushushu obuphezulu;
Ngokubanzi, izivalo zamasango zinendawo ezimbini zokutywina, ezongeza ubunzima ekusebenzeni, ekusileni nasekugcinweni;
Ixesha lokuvula nelokuvala lide.
2. Ivelufa yamabhabhathane : ivelufa yamabhabhathane yivelufa esebenzisa uhlobo lwediski ukuvula kunye nokuvala iindawo ukubuya umva ubuye malunga ne-90 ° ukuvula, ukuvala nokulungelelanisa indlela yokuhamba.
Has Inesakhiwo esilula, umthamo omncinci, ubunzima bokukhanya kunye nokusetyenziswa okuphantsi, kwaye ayisetyenziswanga kwivalve enkulu yokulinganisa;
Ukuvula nokuvala kuyakhawuleza, kwaye uxhathiso lokuhamba lincinci;
Ingasetyenziselwa phakathi kunye neesuntswana ezixhonyiweyo, kwaye inokusetyenziswa kumgubo kunye nemithombo yeendaba eyimbumba ngokwamandla okutywina umphezulu. Ingasetyenziselwa ukuvulwa kunye nokuvalwa kwemibhobho yokuhambisa umoya kunye nokususa uthuli, kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwimibhobho yegesi kunye neendlela zamanzi zentsimbi, ishishini elikhanyayo, amandla kunye neenkqubo zepetrochemical.
Uluhlu lomgaqo wokuhamba awukho mkhulu, xa kuvulwa kufikelela kwi-30%, ukuhamba kuya kungena ngaphezulu kwe-95%;
Ngenxa yokuthintelwa kwesakhiwo sevalveve kunye nezinto zokutywina, ayilungelanga ubushushu obuphezulu kunye nenkqubo yombhobho yoxinzelelo oluphezulu. Iqondo lokushisa eliqhelekileyo lingaphantsi kwama-300 ℃ kunye ne-PN40;
Ukusebenza kokutywinwa kukubi xa kuthelekiswa nevalve yebhola kunye nevalve yokumisa, ke ayiphezulu kakhulu ukutywina.
3. Ibhola yevali : iguquke yivelufa yesiplagi. Amalungu ayo okuvula nawokuvala ayindibano, enokuvulwa ize ivalwe ngokujika ibhola ibe yi-90 ° ejikeleze i-axis yesiqu. Ivelufa yebhola isetyenziswa ikakhulu kumbhobho ukusika, ukusasaza kunye nokutshintsha indlela eya kumbindi. Ivelufa eyilelwe ukuvulwa okumile njengo-V ikwanomsebenzi wokuhamba kakuhle wokuhamba.
Ukuxhathisa kokuhamba kokona kusezantsi (eneneni ngu-0);
Can Ingasetyenziselwa ukubila kwindawo enamanzi kunye neqondo eliphantsi ngokuthembekileyo kuba ayizukubambeka ekusebenzeni (xa kungekho sithambiso);
Uluhlu lwexinzelelo kunye nobushushu, ukutywinwa kunokufezekiswa ngokupheleleyo;
Can Ingakuqonda ukuvulwa okukhawulezileyo nokuvala, kwaye ixesha lokuvula nokuvala kwezinye izakhiwo zii-0.05-0.1s kuphela, ukuze kuqinisekiswe ukuba inokusetyenziswa kwinkqubo yokuzenzekelayo yebhentshi yovavanyo. Xa ivalve ivuliwe kwaye ivalwe ngokukhawuleza, umsebenzi awunampembelelo;
Amacandelo okuvala ibhola anokufumaneka ngokuzenzekelayo kwindawo yomda;
Isixhobo esisebenzayo sitywiniwe ngokuthembekileyo kumacala omabini;
Open Xa ivulwe ngokupheleleyo kwaye ivalwe ngokupheleleyo, umphezulu wokutywina webhola kunye nesihlalo uhlukanisiwe ukusuka kwiphakathi, ke ukudlula okuphakathi kwivelufa ngesantya esiphezulu akuyi kubangela ukhukuliseko lomhlaba wokutywina;
⑧ Ithathelwa ingqalelo njengoyena ulungelelwaniso lwevalve inesimo esiphakathi kubushushu obuphakathi ngenxa yokuma kobumbano kunye nobunzima bokukhanya;
Body Umzimba wevalve ulinganayo, ngakumbi isakhiwo somzimba wevalve, esinokuthwala uxinzelelo kumbhobho kakuhle;
Iindawo zokuvala zinokumelana umahluko omkhulu koxinzelelo xa kuvalwa. (11) Ivalve yebhola enomzimba wevalve welding ingangcwatywa ngqo phantsi komhlaba, nto leyo eyenza ukuba ngaphakathi kwevalve kungabikho mhlwa, kwaye ubuninzi benkonzo bunokufikelela kwiminyaka engama-30, eyeyona ivelufa ilungileyo yeoyile kunye nemibhobho yegesi yendalo.
Ngenxa yokuba izinto eziphambili zokutywinwa kwesitulo se-valve sisihlalo se-polytetrafluoroethylene, inert phantse kuzo zonke izinto zeekhemikhali, kwaye inempawu zokungqubana okuncinci, ukusebenza okuzinzileyo, akukho lula ukuguga, uluhlu olubanzi lwesicelo sobushushu kunye nokusebenza ngokutywina okugqwesileyo. Kodwa iipropathi ezibonakalayo ze-polytetrafluoroethylene, kubandakanya ukwanda kokuqina okuphezulu, ubuntununtunu bokuhamba okubandayo kunye nokungahambi kakuhle kwe-thermal, kufuna uyilo lwesitywina sokuhlala ukuba lujikeleze ezi mpawu. Ke ngoko, xa izinto zokutywina ziba nzima, ukuthembeka kwetywina kuyatshatyalaliswa. Ngapha koko, ukumelana nobushushu be-polytetrafluoroethylene kusezantsi, kwaye kunokusetyenziswa kuphela phantsi komgangatho ongaphantsi kwe-180 ℃. Ngaphezulu kobushushu, izinto zokutywina ziya kuguga. Kodwa xa ujonga ukusetyenziswa kwexesha elide, iya kusetyenziswa kuphela kwi-120 ℃.
Ukusebenza kwayo kulawula kubi kunoko kuvalwa ivalve, ngakumbi ivelufa yomoya (okanye ivelufa yombane).
4. Misa ivalve : ibhekisa kwivelufa ukuba ilungu lokuvala (idiski) lihamba ecaleni komgca wombindi wesihlalo. Ngokwentshukumo yediski, utshintsho lokuvulwa kwesihlalo sevalve lilingana nokubetha kwe-disc. Ngenxa yokuba ukuvulwa okanye ukuvala ukubetha kwesitshixo sevalve kufutshane, kwaye sinomsebenzi othembekileyo osikiweyo, kwaye ngenxa yokuba utshintsho lokuvulwa kwesihlalo sevalve lilingana ngokuthe ngqo nokubetha kwediski yevalve, kulunge kakhulu elawula ukuhamba. Ke ngoko, olu hlobo lwevalve lushukuma kakhulu ukuba lusebenzisane ukusika okanye ukumisela kunye nokujija.
Kwinkqubo yokuvula nokuvala, ukungavisisani phakathi kwediski kunye nomphezulu wokutywina womzimba wevalve kuncinci kunowavalve yesango, ngenxa yoko uyanxiba.
Opening Ukuphakama kokuvula yi-1/4 kuphela yesitulo sokuhlala kwevalve, ke sincinci kakhulu kunesivingco sesango;
③ Ngokubanzi, inye kuphela indawo yokutywina kumzimba wevalve kunye nediski, ke inkqubo yokwenza ilunge kwaye kulula ukuyigcina;
Ngenxa yokuba i-filler ngumxube we-asbestos kunye negraphite, ukumelana nobushushu kuphezulu. Ngokubanzi, iivaluva zokumisa zisetyenziselwa izivalo zomphunga.
① Ngenxa yokuba ulwalathiso lokuhamba oluphakathi ngokutshintsha kwevalvu, ubuncinci bokuhamba kokumelana nevalve yokumisa kuphezulu kunezinye iindidi zezivalo;
Of Ngenxa yokubetha okude, isantya sokuvula sicotha kunesivingco sebhola.
5. Iplagi yevali : ibhekisa kwivelufa ejikelezayo enamalungu avaliweyo okuphuma ngemiphunga. Ngokujikeleza okungama-90 °, izibuko lomjelo kwiplagi yesivingco liqhagamshelene okanye lahlulwe kwizibuko lesitishi kumzimba wevalve, ukwenzela ukuqonda ukuvula okanye ukuvala. Iplagi inokuba kwisimo se-cylindrical okanye esidibeneyo. Umgaqo uyafana nalowo wevalve yebhola. Ibhola ivelufa iphuhliswa ngokusekwe kwiplagi yevali, esetyenziselwa ukuxhaphaza intsimi yeoyile kunye nomzi mveliso wepetrochemical.
6.Ivalve yokhuseleko : ibhekisa kwisixhobo sokukhusela uxinzelelo kuxinzelelo lwenqanawa, izixhobo okanye imibhobho. Xa uxinzelelo kwizixhobo, inqanawa okanye imibhobho inyuka ngaphezu kwexabiso elivumelekileyo, ivelufa iya kuvula ngokuzenzekelayo ize emva koko ikhuphe ngobuninzi obupheleleyo ukukhusela izixhobo, inqanawa okanye umbhobho kunye noxinzelelo ekunyukeni ngokuqhubekayo; xa uxinzelelo luyehla kwixabiso elichaziweyo, ivelufa iya kuvalwa ngokuzenzekelayo kwaye ngexesha elifanelekileyo ukukhusela ukusebenza ngokukhuselekileyo kwezixhobo, inqanawa okanye imibhobho.
7. Umgibe womphunga : kuhlobo lomphunga nomoya ocinezelweyo, kuyakubakho condensate eyenziweyo. Ukuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza okukhuselekileyo kwesixhobo, ezi ndaba zingenamsebenzi kwaye ziyingozi kufuneka zikhutshwe kwangexesha ukuqinisekisa ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwesixhobo. Inemisebenzi elandelayo:: inokususa ngokukhawuleza i-condensate evelisiweyo; Ukuthintela ukuvuza komphunga; ③ zeemoto emoyeni kunye nezinye irhasi engenakunyibilika.
8. Uxinzelelo lokunciphisa ivalve : sisixhobo esinciphisa uxinzelelo lwe-inlet kwisahlulo esithile esifunekayo ngokulungisa, kwaye sixhomekeke kumandla esixhobo ngokwaso ukugcina uxinzelelo lwentengiso luzinzile ngokuzenzekelayo.
9. Khangela ivalve : ekwaziwa njengevalufa yokuhambahamba, ivelufa yokujonga, ivalve yoxinzelelo lwasemva kunye nevalve yendlela enye. Ezi zivalo zivulwa ngokuzenzekelayo kwaye zivaliwe ngamandla aveliswe kukuhamba kwesiphelo sombhobho ngokwawo, kwaye eyeyokuzenzekelayo. Jonga ivalve isetyenziswa kwinkqubo yombhobho, owona msebenzi wayo kukukhusela ukuhamba kwakhona okuphakathi, ukuthintela impompo kunye nokuqhuba iimoto ekubuyiseleni phambili, kunye nokukhupha isikhongozeli esiphakathi. Jonga ivalve ingasetyenziselwa ukubonelela ngenkqubo yokuncedisa ngoxinzelelo olungaphezulu koxinzelelo lwenkqubo. Inokwahlulahlulwa ibe luhlobo lokujija (ujikeleza ngokwendawo yomxhuzulane) kunye nokuphakamisa uhlobo (ukuhamba ecaleni kwe-axis).
Ixesha lokuposa: Mar-31-2021